Maya. 4 Dayrta 2017 - Abaabulka Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Maya. 4 Dayrta 2017
"Habeenku waa sawir cadaalad ah" sida ay ugu yiraahdaan qeybahaas xilliga dayrta. Sidaa daraadeed si aad fikraddaada ugu wareejiso fikradaha diiran, halkan waxaa ah sheekooyin kooban iyo waxyaabo war ah oo ku saabsan Ururka Abaalmarinta Reward iyo hawlaha aan soo sheegnay bilihii lasoo dhaafay. Waxan ku darnay wax walba oo aan sameynay maadaama aad akhri kartid sheekooyinka horey u soo qorey waxyaabihii aan ku soo qornay website ama inaga Twitter quudiyaan.
Waxaan kuu rajaynayaa xilli farxadeed oo farxad leh markay timaado. Nabad iyo jacayl dhammaantiin dhammaantiin qof kasta oo ka socda Hay'adda 'Reward Foundation'.
Dhammaan ra'yi-celinta waxaa lagu soo dhaweynayaa Mary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Aqoonsiga RCGP ee Aqoonsiga Abaalmarinta
Maqaalka Your Porn by Gary Wilson
"Aag cusub oo daawo ah" - Shirka Caafimaadka ee Dhallinyarada RCGP
Cilmi-baarista TRF ayaa la daabacay
Xarunta Ballanta Magaca ee Cadaaladda Dhalinyarada & Caddaaladda
Xiriirada Scotland - Tababarka Jinsiga ee Tababarka Labada Lamaane
Edinburgh Medico-Chirurgical Society (oo la aasaasay 1821)
Bulshada Horumarinta Caafimaadka Galmada (SASH)
Kooxda Tiyaatarka Dhalinyarada, Wonder Fools waxay ku qaadaan Porn in The Coolidge Effect
Hay'adda Reward Foundation waxay ku qoreen College College of Practitioners in ay bixiyaan tacliinta joogtada ah (CPD) ee GP-yada ku saabsan mawduuca saameynta lidka fidinta internetka ee caafimaadka dhimirka iyo jirka. Ballanqaadku wuxuu ku biirayaa xubnaha mid ka mid ah kulliyadaha kale ee Caafimaadka ee Boqortooyada Ingiriiska iyo Ireland.
Waxan ugu horreyn ku bixin doonaa seminaaro hal maalin ah. Mid waliba wuxuu noqon doonaa dhibcaha 7 CPD. Cilmi-nafsi yaqaanka, kalkaaliyayaasha, iyo daaweeyayaasha ayaa la soo dhaweynayaa. Maadaama ay dhakhaatiirtu si dhakhso ah looga baahan yahay inay bixiyaan talo caafimaad dadka raba raadinta dawooyinka ka soo horjeeda dabacsanaanta erectile, waanu la shaqeyn doonaa iyaga. Qorshuhu waa inuu bilaabo bilawga qabsashada shaqooyinka bisha Janaayo. Fiiri faahfaahinta. Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan seminaarada wakhtigaas, fadlan la soo xiriir mary@rewardfoundation.org.
Maskaxdaada on Porn by Gary Wilson
The edition labaad ee buuggan aadka u fiican iyo buug yar ayaa hadda la heli karaa.
"Maskaxdaada Porn waxay ku qoran tahay luuqad fudud oo fudud oo ku habboon khabiir iyo qofwalba isla markaana waxay ku xididaysan tahay mabaadi'da neerfaha, cilmu-nafsiga dabeecadda iyo aragtida isbeddelka… Maaddaama aan ahay cilmi-nafsi cilmi-baare, waxaan ku qaatay in ka badan afartan sano baaris aasaaska dhiirrigelinta waana xaqiijin karaa in falanqaynta Wilson ay aad ugu habboon tahay dhammaan wixii aan soo helay. ”
Professor Frederick Toates, Jaamacadda Furan, qoraaga Sida Loo-shaqeeyaha Dumarka u Shaqeeyo: U Faraxsanaan Doono.
2014, marka Maskaxdaada on Porn markii ugu horreysay ee la daabacay, sawir-gacmeedyada iyo farsamooyinka kale ee farsamada ee xidhiidhka aadanaha oo si khaas ah loogu arkay dood dadweyne. Tan iyo markaa dhaqanka balaadhan ayaa si tartiib tartiib ah u ogaanaya in indhaha lagu hayo shaashadda ama ku xirnaanta dhegeysiga VR uusan ahayn waddada xoriyada galmada. Caddeynta waxay tilmaameysaa jihada ka soo horjeeda. Waxyaabaha galmada shaxanka ah, oo laga heli karo baahida, iyo muuqaalka kala duwan, waxay keeni kartaa khatar weyn oo ku salaysan samaqabka dadka. Afartan daraasadood ayaa hadda la xiriirta isticmaalka sigaarka si ay u noqoto mid liita garashada iyo dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda. Laba iyo labaatan daraasadood ayaa isku xira isticmaalka porno ee dhibaatooyinka jinsiga iyo kor-u-qaadista dareenka jinsiga. Shan ka mid ah kuwaani waxay soo jeedinayaan sababtoo ah ragga waxaa lagu qiimeeyay dhibaatooyin caafimaad iyadoo la tirtirayo isticmaalka sigaarka.
Ka soo horjeedda aragtida caanka ah, qaan-gaarka waxay u isticmaalaan adeegyada GP-yada si joogto ah sida kooxaha da'da kale. GP-yada aan ku soo bandhignay shirkaan ayaa sheegay in aysan su'aalaha saxda ah weydiinin bukaanada qaar markii ay la kulmaan xaalado gaar ah. Mid ka mid ah dhakhaatiirta guud (GP) ayaa sheegay in waxyaalaha la shaaciyay ee ku saabsan saameynta galmada ay tahay "sida helitaanka aag cusub oo daawo ah ama helitaanka xubin cusub." Waan ku faraxsanahay in soo bandhigiddu ay si fiican u dhacday oo ay la xiriirtay dhaqankooda caafimaad. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay ka go'an tahay inay mustaqbalka su'aalahaas aadka u culus weydiiyaan.
Tani waxay ka dhacday shirkii koowaad ee abid ee Scotland oo ku saabsan caafimaadka dhallinyarada. Waxaa lagu qabtay magaalada Edinburgh ee 17 November waxaana soo qabanqaabiyay RCGP khabiiro ku wajahan dhalinyarada ka soo jeedda London. Waxaa jirey daaweenta daryeelka 40 ee dhagaystayaasha.
Bishii Febraayo 2017, kooxda TRF waxay ka soo qayb gashay 4th Shirka Caalamiga ah ee Ku-Xadgudubka Dabeecadda ee Israel. Shirkan tacliimeed wuxuu soo bandhigay cilmi baaristii ugu dambeysay ee ku saabsan saameynta kala duwan ee filimada qaawan ee internetka ee ku saabsan dhaqanka. Iyadoo la tixgelinayo muhiimadda mawduucani u leeyahay bulshada daweynta iyo cilmiga cilmi-baarista ee qaawan, waxaan soo uruurinnay maqaal si aan uga dhigno cilmi-baaristaan ​​muhiimka ah bulshooyinkaas.
Pornography iyo Warshadaha Cilmi-Baarista Galmada ee Shirka Caalamiga ee 4th ee Ku-Xeeladaha Habdhaqanka ayaa lagu daabacay Macaamilka Galmoodka iyo Isku Xidhnaanta khadka tooska ah 13ka Sebtember 2017. Waxay ku soo bixi doontaa daabacaadda Volume 24, Number 3, 2017. Nuqulo bilaash ah ayaa lagu heli karaa codsi ka yimid darryl@rewardfoundation.org.
Maamulaheena guud, Mary Sharpe waxaa laga dhigay isku xiraha xarunta dhalinyarada iyo cadaalada (CYCJ) oo xarunteedu tahay jaamacada Strathclyde ee Glasgow. Waan ku faraxsanahay. Mary ayaa tiri "Waxaan rajeynayaa inay gacan ka geysan doonto faafinta warka cilmi baarista iyo wacyigelinta ee Hay'adda 'Reward Foundation' iyo kobcinta tabarucaadeena horumarinta siyaasadda guud ee Scotland. Mary waxay kahadli doontaa munaasabada CYCJ markay ahayd 7 Maarso 2018 magaalada Glasgow oo loogu yeero: Unugyada sayniska iyo unugyada xabsiyada: La kulma baahida xididada iyo garashada ee dhalinyarada nugul.
Waxaa jira sababo badan oo lammaanaha qaarkood u isticmaalaan suuqyada. Waxkasta oo dhiirigalin ah, lamaanayaal badan oo intaa ka badan waxay raadsanayaan caawimaad ka soo jeeda jinsiyadaha jinsiga ee Xiriirka Scotland. Sida laga soo xigtay Anne Chilton, oo ah madaxa tababarka halkaa, ee sawirada 1990 ayaa ah arrin ku saabsan xNUMX% lamaanayaasha soo socda ee la talinta. Maanta waxay tiraahdaa waa dhibaato in ka badan 10%. Isticmaalka pornography-ka ee aan xakameynin ayaa lagu qeexay sababaha furriinka iyo burburinta xiriirka tirada sii kordheysa ee cilaaqaadka. Waxay tiri, "waxay ogyihiin wax walba oo ku saabsan jinsi kasta, lakiin waxba looma helin isdhexgalka."
Si loo caawiyo daaweeyayaashu inay fahmaan oo ay wax ka qabtaan deegaanka cusub ee ladagaallamaya, Takhasuska waxaa lagu martiqaaday inuu tababaro u fidiyo kooxdii ugu dambaysay ee daaweenta loo tababaray. Takhaatiirta jinsiga ayaa si gaar ah loogu tababaray cilmi nafsiga. Maanta macaawin ku saabsan qabatinka dabeecadda iyo cilmi-baarista neurosiyoolojiga ee hoos u dhigaya waa qayb muhiim ah oo ku saabsan tababarka daaweynta xiriirka. Waxay ka caawisaa tusaale ahaan in la fahmo sida ragga gaar ahaan, kuwa yihiin kuwa ugu weyn ee filimada sawir-qaadida ee internetka, waxay kor u qaadi karaan noocyada cusub ee porno waxayna u baahan yihiin heer dhiirigelin ah oo aan lamaaneeyn karin. Taas waxaa loo yaqaan 'dulqaad' oo ah qadar caadi ah oo ah takoorid.
Abuurka waxaa la beeray ku dhowaad saddex sano ka hor. Waqtigaas, madaxa Sharciga Mary Sharpe wuxuu soo bandhigay bandhig ku saabsan xirfadlayaasha cadaaladda dembiyada ee ku saabsan saameynta sawir-gacmeedka internetka ee maskaxda dhallinyarada iyo xidhiidhinta dembiyada galmada. Dhegaystayaashu waxay ahayd dhakhtar dhimir ah oo la taliye Bruce Ritson oo cusbitaalka Royal Edinburgh iyo aasaasaha SHAAP (Waxqabadka Caafimaadka Scottish ee Dhibaatada Khamriga). Waxa uu ka yaabay sida la mid ah saameynta saameynta maskaxda iyo saameynta khamriga maskaxda dhallinyarada. Labadaba waa kuwa xasaasiyad leh, marka la isticmaalo mudo ka badan waqti, waxay dib u dhigi kartaa maskaxda iyo shaqooyinkeeda, gaar ahaan maanka maskaxda ee dhalinyarada. Dhab ahaantii cilmi-baaristu waxay muujineysaa in maskaxda dadka dhallinyarada ah ee dhallinyarada ah ee xayawaanku ay iftiimiyaan si ay uga jawaabaan sheekooyinka si la mid ah macaamiisha cocaine addicts iyo khamriga marka la muujiyay tilmaamo u dhigma.
Natiijada dhacdadan iyo wadatashiyada dambe, Bruce Ritson ayaa si nasiib ah noo casuumay inaan bixinno khudbadda furitaanka ee Ururka Caafimaadka Madow ee Sacuudiga ee 190th fadhiga bisha Oktoobar sannadkan.
Dhakhaatiirtu waxay ku suganyihiin dhammaadka daryeelka caafimaadka sidaa daraadeed waxay had iyo jeer xiiseynayaan waxkasta oo ka mid ah caafimaadka maskaxda iyo jirka. Waxaan awoodnay inaanu bixinno horumarkii ugu dambeeyay ee cilmi-baarista, oo ay ku jiraan waraaqaha muujinaya in xitaa isticmaalka 'dhexdhexaad' isticmaalka porno (saddex saacadood toddobaadkii) ayaa xaddidaya miisaanka miisaanka meelaha muhiimka ah ee maskaxda. Maqnaanshaha dhalinyarada ee aan weli dhalan ayaa si gaar ah u nugul.
Xubin Guddi ah oo ka tirsan hay'adda Maraykanka ee saldhigeedu yahay SASH, madaxa shirkada Mary Sharpe ayaa looga baahan yahay inay ka soo qayb galaan shir sannadeedka. Ma aha wax culus oo dhan. Waa farxad in la kulmo lana falanqeeyo isbeddelada ugu dambeeyay ee baaxadda leh iyada oo la adeegsanayo xarumo badan oo xarumo caafimaad, aqoonyahanno iyo xirfadlayaal caafimaad oo ka socda dhamaan Maraykanka iyo wixii ka baxsan. Sannadkan waxaan joognay Salt Lake City, Utah.
Intaa waxaa dheer in ay ku hadlaan dad aad u fiican sida Professor Warren Binford oo ka hadlay cilmi-baarista ku saabsan dhaawaca joogtada ah ee dhibanayaasha sawirka cunsuriyada caruurta (arag iyada Hadalka TEDx), waxaan ka wareysanay Madaxweynaha SASH, Mary Deitch, oo ah aqoonyahan cilmu-nafsi ku tababaran sharciga oo ku saabsan khibradeeda ku saabsan la dhaqanka dadka dembiilayaasha galmada ah. Waxaan sidoo kale wareysanay nin dhalinyaro ah oo deegaanka ah, Hunter Harrington, (17 sano jir) oo isagu laftiisu yahay qof daroogo ka soo kabanaya. Wuxuu kadhigay hadafkiisa inuu caawiyo dadka kale ee dabinka loo dhigay iyo halka ay macquul tahay si looga hortago dhalinyarada kale inay khilaaf galaan. Wareysiyada tifaftirka waxaa laga heli doonaa boggayaga internetka waqtiga ugu habboon.
Kooxda Tiyaatarka Dhalinyarada, Wonder Fools ayaa ku qaadanaya Porn Saameynta Coolidge
Reward Foundation wuxuu ahaa sharaf leh kafaalo qaadid oo ay la socoto Royal Conservatoire of Scotland oo ka tirsan kooxa masraxa dhalinyarada, Wonder Fools, iyaga oo soo saaray waxtarka Coolidge Effect. Eeg halkan waayo sheeko hore oo ku saabsan.
Bandhiga masraxa nool waa mid dhexdhexaad ah oo loogu talagalay waxbarashada gaar ahaan dhalinyarada iyo walwalka aad ugu dhow wadnaha.
Waxaad helaysaa emailkan sababtoo ah waxaad ka dooratay boggayaga internetka www.rewardfoundation.org.Cinwaanka boostada waa: